Dad ka Yimid Soomaliland oo Buux Dhaafiyay Muqdisho Sababta Akhri « AYAAMO TV
Dad ka Yimid Soomaliland oo Buux Dhaafiyay Muqdisho Sababta Akhri
10695 Views Date March 2nd, 2014 time 7:07 pm
Waxaa Magaalada Muqdisho buux dhaafiyay dad fara badan oo doonaya in aay qaatan baasaborka soomaliga kuwaaasi oo ka imaanaya Maamulka la baxay Soomaaliland.
Marka tagto goobaha laga baxiyo sharciyada sida xarunta dad dhigista oo ku taala degmada shangaani ee magaalada muqdisho waxaa arkaysa dad fara badan oo intooda badan ka yimid maamulka la baxay Soomaaliland muqdishana u yimid in aay helaan Baasaborada.
gabar magaceeda ku soo koobtay fowsiyo oo ka mid ah dadka qaatay Baasborka soomaliga ayaa sheegtay in aay ugu soo socdaashay magaalada hargaysa qaadashada baasaborka soomaaliga kuna qaadatay mudo bil ah.
sido kale mid ka mid shaqaalaha wargayska Haaatuf ee ka soo baxa magaalada hargaysaa kana gaabsaday magiisa sabaabo amaan ayaa sheegay in siminaar usoo baxay lagu xujeeyay baasaborka soomaliga sidaa daraadeedna usoo doontay baasborka magaalada muqdisho.
walaahi waxaa aan sugaaya in ka badan 15 maalin ilaa haatana ma aanan helin waxaa aanu soomaaliland ugu soo tagnay ilaa 7 saxaafi oo doonayo baasaborka Soomaaliga sadax ka mid ah ayaa helay ayuu yiri suxufigaasi oo la hadlayay ayaamo.com.
si kastaba ha ahaate waxaa aay magaalada muqdisho la ciir ciiraysa dad doonaya in aay helaan baasaborka soomaaliga.